Fijery Tokana Avy Any Darforo : Sleepless (Tsy fahitàn-tory) Ao Sodàna · Global Voices teny Malagasy
Fijery Tokana Avy Any Darforo : Sleepless (Tsy fahitàn-tory) Ao Sodàna
Voadika ny 30 Novambra 2017 12:05 GMT
(Fanamarihana:Lahatsoratra nivoaka tamin'ny Jolay 2005)
Miserana ireo tantara vaovao – ny daroka baomba any Londona, ny fifantohan'ny G-8/Live8 amin'i Afrika, ny tsingerin'ny fahenimbolan'ilay “tsunami” tamin'ny Faran'ny Taona – fa i Darforo kosa mitoetra. Koa satria miha-mazava hatrany hatrany fa tsy handray anjara mavitrika amin'ny toe-draharaha momba an'i Darforo i Etazonia, dia tsy ho hita firy any amin'ny gazety mahazatra ireo tantara vaovao momba an'i Sodàna Andrefana. Manaraka izany rehetra izany, tsy ho lasa lohateny lehibe mihitsy ny hoe “Darforiana an-tapitrisa no mbola miaina any an-toby, mbola miala aina miandàlana”.
Ho an'ireo olona liana amin'ny zava-miseho ao amin'ny tobin'ny IDP (olona nafindra toerana anatiny) ao Darforo, dia tsy maintsy mamaky ny bilaogy “Tsy Fahitàn-tory ao Sodàna (Ang) “. Fantatray fa ” Sleepless” dia vehivavy 31 taona, mpitovo, mpiasa an-tsitrapo,’ ary mipetraka sy miasa ao amin'ny tobin'ny IDP any Darforo. Fantatray ihany koa manana maso maranitra izy ary mbola manana fisainam-pikomiana sy fanomezam-pahasoavana mba hahatanteraka ireo tranga mampihorohoro iainan'ireo darforiana an'arivony maro.
Ny momba ny tobin'i Kalma, izay ialokalofana IDP 150.000 eo ho eo, no lahatsoratra navoakan'i Sleepless vao haingana. Mahaliana ny governemanta Sodane ny handràva ilay toby, mety noho ny antony ara-drariny hoe tandindonin'ny tondradrano izy io ( lahatsoratra vao haingana izay mamaritra an'i Khartoum ho toy ny ” tena Venise Afrikana “, miaraka amin'ireo fiarakaretsaka sy tuk-tuk mihitsoka any anaty fitohanan'ny fifamoivoizana ao anaty rano), na noho ny tahotra fa misy mpikomy miofana sy mivondrona ao anatin'ny toby.
Mitarika ny fahatapahan'ny ” tsena maizin'ny ” sakafo – i.e, na inona na inona fanampiny amin'ny foto-tsakafo zarain'ny vondrona mpiahy ny maha-olona sy ny fandrahonana handrava ny toby- ilay ezaka famindràna ny mponin'i Kalma ho any aminà toby vaovao sy kely any Al Salam. Araka ny filazan'i Sleepless dia olona marobe no nafindra any Al Salam hatreto.
Tsotra ny antony – ahiahy momba ny filaminana. Na misy isanandro aza ireo tifitra ao an-toby sy any amin'ireo tanàna manodidina, dia tena heverina izy ireny fa azo antoka kokoa noho ny any amin'ireo tanàna kely nandosiran'ireo IDP, izay itoeran'ireo Janjawid izay nandroaka ireo mponina tao amin'ireo tanàna kely ireo tany am-boalohany. Mitarika ho aminà toedraharaha tahaka ilay iray nofaritana ho toy ny fisainana mampalahelo momba ny manga navoaka tokony ho herinandro lasa izay :
“Eny, zatra namboly manga izahay,” hoy ny iray amin'ireo mponina ao an-toerana (izay nifindra noho ny ady ary miaina miaraka amin'ny fianakaviany any amin'ny iray amin'ireo toby ) tamiko. Tamin'ity vanim-potoana ity, dia nanao vivery ny aiko mihitsy aho niverina tany amin'ny sahako avy aty an-toby mba hamboly fotsiny. Nefa herinandro vitsy lasa izay dia tena zava-doza ny mivoaka any ivelan'ny toby noho ireo tifitra sy fanafihana ny olona tahaka anay. Noho izany tsy afaka nandeha aho ary tsy naha-oty na inona na inona. Amin'izao fotoana izao, ireo olom-baovao avy amin'ny toby hafa izay nifindra ao amin'ny tanànako sy miasa ireo taniko no mivarotra amiko ny mangako eny an-tsena.”
Tsy maintsy lokin'ny hehy izahay rehetra – tsy misy fomba hafa hiatrehana ilay tranga hafahafa na dia azoko antoka aza fa izay no zavatra farany tsapan'ilay namako ho atao rehefa handoa vola amin'ilay lehilahy izay nanolotra azy ny mangany teny an-tsena.
Mihivingivin-doha fotsiny izy. Avy eo mihomehy indray. ” Hoy ianareo, mbola ratsy kokoa noho izany ny nanjò ilay rahalahiko (zanaky ny mpiray tampo amin'ny ray aman-dreniko). Nividy manga maromaro tamin'ireo olona mamboly ny taniny amin'izao fotoana izao izy, ary rehefa andeha hody any amin'ny manodidina ny toby izy, dia nisy jiolahy nanomboka nanosika sy nisotasota azy. Nalain-dry zalahy ny volany sy ireo manga ihany koa. Araka izany, namboly azy ireny izy aloha, nandoa vola indray tamin'izy ireny, ary dia mbola tsy manana manga ihany izy.
Tsy voatàna izahay fa mihomehy indray, saingy indrisy, fa tsy maintsy miaiky aho fa mamela tsiro mangidy fara tsy toy ny mahazatra ireo manga mamy androany.
Indrisy, matetika dia tantara tsy azonao ihomehezana ny tantaran'i Sleepless. Henony ny tatitra momba ireo vehivavy voadaroka sy voaolana rehefa mandeha maka kitay any ivelan'ny toby. Nampitomboiny ny tranga mampihorohoro mety hisy hoe ireo mpanohitra ny Janjawid, ny mpikomy manohitra an'i Khartoum, manampy amin'ny ampahany mba hitazonana ireo Dolara fanampiana mikararàna any amin'ny faritra no manao ireny fanafihana ireny :
Miverimberina ny adihevitra, fa farany dia napetrako fa lehilahy maro no mahatsapa fa minia mamela milisy vitsivitsy any amin'ny faritra ireo mpikomy mba hahazoana antoka fa voatazona TANTERAKA ny filaminana.
“Raha toa ka tsy misy fahafatesana, tsy misy fanolànana, tsy misy na inona na inona, dia tsy ho avy aty ianareo khawajas [vahiny], hoy ry zareo. Paikady fampiasan'ny mpikomy izany.”
Tsy mora velively na mampahazo aina ny mamaky ny Tsy Fahitan-tory Ao Sodàna. Fa maka risika manokana ilay mpanoratra mba hitantaràna amintsika ireny tantara ireny ary tena antenainy fa misy olona mihaino.
(Ho fanampim-panazavàna bebe kokoa momba ny toe-draharaha any Darforo, mety tianao ny mamaky ny bilaogin'ny New Republic (Repoblika Vaovao) tamin'ity herinandro ity, izay manasongadina ny ampahany nosoratan'ny Profesora Eric Reeves avy ao amin'ny Smith College, izay manaraka akaiky ny teo-draharaha any Darforo sady manana fanazavàna tonga lafatra momba ny fomba nahatongavan'ilay toe-draharaha.)